Viga chero chikamu chevashandisi muOS X | Ndinobva mac
Viga account yemushandisi iwe yaunoda mu OS X
Muazvino mashandiro, chinhu chakajairika kunze kwekunge chiri chekushandisa wega, ndechekuti tine maakaundi akati wandei anofambidzana nehurongwa hwevanhu vakasiyana vanoishandisa maakaundi akasiyana eamamwe mashandisiro. Nekudaro, nekuda kwezvimwe zvikonzero zvinokwanisika kuti hatidi kuti imwe yenyaya idzi ioneke kune vamwe. Aya mamiriro ane musoro mune system manejimendi maakaunzi ayo anoda kuviga akaundi account kuitira kuti mushandisi arege kuiona kana achipinda, asi kuti zvakadaro zvinoshanda nekuda kwezvikonzero zviri pachena zvekure kure kugadzirisa kwezviitiko kana chero imwe mamiriro ezvinhu anoda kushandiswa kwataurwa account.
Nenzira iyi paunenge uchivanza chikamu kana account zvatiri kuda, zvatichaita ndezvekuti isu tichaisiya ichishanda kuti tiiwane pane yekutambira skrini sezvakangoita zviwanikwa zvakagovaniswa asi hazvingaratidzike pakutanga pane iyo yekupinda skrini.
Kutanga, isu tichamhanya iyo Terminal muOS X uye tichava takagadzirira zita pfupi reakaundi account iyo yatinoda kuvanza, rinowanzove iro zita ratinoona mudhairekitori reimba yemushandisi muKutsvaga, uye isu tinopinda zvinotevera:
Isu tichachinja "ACCOUNT ZITA" kune iro pfupi zita rekushandisa rekupinda
sudo dscl. gadzira / Vashandisi / ACCOUNT ZITA Rakavanzwa 1
Ramba uchifunga kuti neiyi avatar haichazowoneka, uye haizoonekwe pachiratidziro chekupinda, kunyange ichiri kugona kuwanikwa neSSH kana tichiziva kuti iyo account iriko. Kuratidza account zvakare zviri nyore, ingochinja iyo "1" kuenda "0" kuti uvatore, ndokuti:
sudo dscl. gadzira / Vashandisi / ACCOUNT ZITA Rakavanzwa 0
Sapakutanga, iyo Mac inoda kuzotangwazve kuti shanduko iite. Sezvandamboreva, uyu murairo hauwanzoshandiswa zvakajairika kubvira chaizvo kuvanzika kwemumwe neumwe mushandisi kwakatodzivirirwa uine rako rekupinda password, asi rinogona kubatsira kune mamwe mabasa senge system management.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Viga account yemushandisi iwe yaunoda mu OS X
Apple inoonekwa seyekutanga mhando yemhando yepamusoro yevaAsia